Hooyo iyo caruurteeda oo xabsi loogu taxaabay dilka aabaha qoyska
Ciidamadda booliska ayaa xabsi u taxaabay saddex looga shakisan yahay falkaan.
NAIROBI, Kenya – Booliska ismaamulka Meru ee Kenya ayaa haweenay 40-jir ah u xiray tuhun la xiriira dilka iyo aasida seygeeda. Wiil iyo gabar ay dhashay waxaa sidoo kale looga shakisan yahay in ay falkaan ka qeyb-qaateen.
Meydka Julius Kalawa Mikiigu oo 54-jir ah ayaa waxaa suuli kasoo saarey booliska bil kadib markii lagu waayey tuuladda Manthi.
Ciidamadda ayaa soo xiray Margaret Karimi oo ay wehliyaan wiilkeeda 19-jirka ah Andrew Mutuma iyo gabadheeda 15-jirta ah Esther Kawira. Saddexdooda waxaa la tuhunsan yahay in ay ku lug-leeyihiin dhacdadan.
Saraakiisha ammaanka ayaa soo wariyey in aabaha qoyska la waayay 27-kii August ayna tan iyo waqtigaas wadeen baaritaano kala duwan.
Wargeyska Daily Nation ayaa wariyey in is-qabqabsi dhul oo muddo soo jiitamayey uu la xiriiro dilka si gaar mid ah isku haystaan 12 caruur ah. Dadka degaanka waxay ka gaabsadaan in ay fahfaahin bixiyan.
Sidda ay xusayaan warbixinadda, is-qabqabsigaas dhuleed wuxuu si gaar ah u daaran yahay dhismaha guri midkood uu rabo in uu dhiso.
La tuhunsaneyaashan ayaa hadii lagu helo dambiga waxay ku muteysan karaan ugu yaraan sanado badan oo xabsi ah. Muranada dhulka iyo kiisaska dadka loo khaarjinayo waa mid kusoo badanaya gudaha waddanka Kenya.
ONLF iyo Jubaland oo warar is-burinaya kasoo saaray kulanka Nairobi
Afrika 28.11.2019. 11:25
Kenya iyo Tanzania oo soo saaraya Gaas xili ay jirto xiisada Soomaaliya
Afrika 07.07.2019. 11:35